Khilaafka Imaaraatiga & Soomaaliya iyo saameynta ciidamada Badda Puntland (PMPF) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Khilaafka Imaaraatiga & Soomaaliya iyo saameynta ciidamada Badda Puntland (PMPF)
April 15, 2018 - By: Maxamed Cismaan
Xiriirka dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Imaaraatiga Carabta oo bilihii lasoo dhaafay soo xumaanayey ayaa hada u muuqda inuu saameyn ku yeeshay xiriirkii wanaagsanaa ee ka dhaxeeyay Puntland iyo Imaaraatiga Carabta.
Saraakiisha Amniga Puntland ayaa la sheegay inay shalay ka horjoogsadeen Tababarayaasha Imaaraatiga inay magaalada Bosaaso kala duulaan qaar kamid ah hubkii ay la yimaadeen wadanka.
Diyaarad khaas ah oo ka timid dalka Imaaraatiga ayaa magaalada Muqdisho kasoo qaaday tiro kamid ah tababarayaasha dalkaasi u dhashay ee wax bari jiray ciidamada dowlada Federaalka qeybtooda Danab (Komandooska), Diyaaradan oo soo martay Bosaaso ayaa halkaasina kasii qaaday tiro kale oo tababarayihii u dhashay UAE ee wax bari jiray ciidamada Badda Puntland ee loo yaqaan PMPF ama Marineska.
Dhaq dhaqaaqan uu Imaaraatiga kala baxayo dalka saraakiishiitababarka bixin jiray ayaa si gaar ah kedis ugu noqotay dowlada Puntland oo la sheegay inaan horey loola socodsiin, arrintaasi oo keentay khilaafkii shalay ka dhashay Madaarka Bosaaso oo ay muddo saacado ah halkaasi ku xanib naayeen saraakiisha Imaaraatiga iyo diyaaradoodii.
Warar ay Horseed Media ka helayso qaar kamid ah saraakiisha Amaanka Puntland ayaa sheegay in loo diiday tababarayaasha Imaaraatiga inay hub kala baxaan kaydka hubka ee ciidamada PMPF, kuwaasi oo ay ku jiraan hubka fudud ee gacanta lagu qaato iyo waliba kuwa culus oo ay qorsheynayeen in lagu qaado Markab lana geeyo magaalada Berbera.
Ugu danbeyn diyaaradan Imaaraatiga ayaa loo fasaxay inay sii wadato safarkeeda walow la sheegay in tababarayaasha ka dhoofay Bosaaso loo diiday inay halkaasi kala baxaan wax hub ah.
Waa markii ugu horeysay oo khilaaf heerkan ah soo dhexgalo Puntland iyo Imaaraatiga oo horey xiriirkooda u wanaagsanaa, waxaana arrintan loo aaneenayaa khilaafka Federaalka Soomaaliya iyo Imaaraatiga oo bishan heerkii ugu xumaa gaaray kadib markii Madaarka Muqdisho lagu qabtay lacag ku dhaw 10 milyan oo dollar oo laga keenaya Abu Dhabi.
Lacagtii Muqdisho iyo Puntland
Warar lagu kalsoon yahay oo ay Horseed Media helayso ayaa sheegaya in Imaaraatiga ka codsaday Dowlada Puntland inay sheegato in lacagtii lagu qabtay Muqdisho ay iyadu qeyb ku lahayd, balse Puntland ayaa ka gaabsatay arrintaasi taasi oo la sheegay inay soo dadajisay go’aankan deg degta ah ee Imaaraatiga ka qaatay taageeradii uu siin jiray ciidamada Badda Puntland.
Imaaraatiga ayaa ku doodayey in lacagtii lagu qabtay Muqdisho ay ahayd mid loo siday ciidamada Militariga iyo kuwa badda ee Puntland, lacagtaasi oo kusoo beegantay imaanshaheeda xili khilaaf siyaasadeed uu ka taagnaa mooshinkii laga keenay Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Maxamed Cismaan Jawaari.
Balse dowlada Puntland ayaa ka gaabsatay inay sheegato lacagtan oo aan illaa iyo hada la aqoon cida loo waday, balse dowlada Federaalka ay tuhun weyn ka muujisay.
Tuhunkaasi oo ah mid la xariira cadadka lacagta oo ka badan intii ay ka heli jireen Federaalka iyo waliba Puntland taakulada Imaaraatiga siiyo ciidamadooda.
Mustaqbalka Ciidamada Badda (PMPF)
Ciidamada Badda ee Puntland waxaa la asaasey sanadkii 2010, sababta loo asaasey ayaa ahayd in ay ka hortagaan Burcadbadeeda, Erik Prince uu ahaa ninkii iska lahaa shirkaddii denbiyada badan ka gashey dalalka Ciraaq iyo Afqaanistaan ee Blackwater ayaa ka dhaadhicyey hawlgalkii looga hortaagaayey Burcadbadeeda ee Maraykanka iyo Midowga Yurub, in habka keliya ee burcadda wax looga qaban karo ay tahay in looga hortago halka ay iska soo abaabulaan oo ah dhulka, qorshahan ayaa laga iibiyey Dowladda Imaaraadka carabta oo maalgelisay maadaama maraakiibta isticmaasha dekadohoodu 60% ay isticmaalaan gacanka Cadmeed, khatarna ay ku imaan karto ganacsigooda.
Xiriirka sii xumaanaya ee Imaraatiga iyo Soomaaliya waxa uu saameyn ku yeelan karaa dhismaha ciidanka PMFP , waxaana muhim ah in Puntland ay ilaaliso istraatiijiyadda jiritaanka ciidanka PMFP, waxna ka beddesho sharciyadooda, loogana dhigo ciidan si toos ah u hoos yimaada Taliska guud ee ciidanka Puntland iyaga iyo kuwa kale ee lamid ah ee dalalka shisheeye ay dhaqaalahooda bixiyaan.